Xisbiga Himilo Qaran: Dowladdu ha joojiso bixinta shatiyada iyo iibinta xirmooyinka shidaalka – Kalfadhi
Xisbiga Himilo Qaran: Dowladdu ha joojiso bixinta shatiyada iyo iibinta xirmooyinka shidaalka
Xisbiga Himilo Qaran ee uu hoggaaminayo madaxweyne hore Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu baaqay Dowladda Federaalka inay joojiso bixinta ruqsadaha shidaal-baarista. Warsaxaafadeed uu soo saaray xisbiga waxaa lagu sheegay in aan la joogin xilliga ugu habboon ee soo-saarida shidaalka. Waxa baaqa xisbiga lagu saleeyay in sharciyadii iyo xeerarkii maamulidda shidaalka aysan weli diyaar aheyn.
War saxaafadeed xisbiga Himilo Qaran ayaa kusoo beegmay iyada oo uu maanta London ka furmayo shirka looga arrinsanayo shidaalka Soomaaliya. Shirka ayaa waxaa soo qabanqaabisay shirkadda Spectrum la yiraa waxaana jira tuhun ah in lagu daahfurayo bixinta shatiyo iyo iibinta 50 goob oo shidaal laga soo saarayo.
Hoggaamiyha Xisbiga Wadajir ahna wasiir hore ee Wasaaradda Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah
Xisbiyada kale ee Wadajir iyo Midowga Nabadda iyo Horumarka ayaa horey usoo saaray war saxaafadeedyo ay kaga soo hor-jeedaan shirka London. Waxaa sidoo kale shirka qaadacay Guddiga Kheyraadka Qaranka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha ee Aqalka Sare. Guddoomiyaha Guddigga Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Bii’ada ee Golaha Shacabka oo horey loo faafiyay in uu shirka ka qeybgalaya ayaa isna iska fogeeyay shirka, isaga oo uu sheegay in guddigu si dhow isha ugu hayo shirka iyo waxyaabaha kasoo baxa. Laakiin dowladda Federaalka waxa ay sheegtay in shirka London lagu soo bandhigayo oo keli ah sahanka iyo xogaha lagu sameeyay shidaalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddigga Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Bii’ada ee Golaha Shacabka oo beeniyay in uu ka qeybgalayo shirka London
Xisbiga Himilo Qaran waxa uu sidoo kale ka digay khilaaf ka dhasha ku deg-degiga bixinta iyo soo-saarrida iyada oo aan heshiis laga gaarin qeybsiga kheyraadka dabiiciga oo ku xiran qabyotirka dastuurka ku-meel gaarka ah. Waxaan weli sharci ahaan u dhaqan-gelin heshiiskii sanadkii hore ee ay Baydhabo ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad-goboleedyada oo farayay dhismaha hey’ad qaran oo maamusha shidaalka Soomaaliya iyo shirkad qaran oo iibisa.
Halkan ka daawo wareysi aan la yeelannay madaxweyne hore Xasan Sheekh Maxamuud
Halkan ka akhriso war saxaafadeedka xisbiga Himilo Qaran oo dhammeystiran.
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo shir uga qayb galaya K/Koofureed
Madaxweyne Waare oo magacaabay Wasiiro ka dhinaa Xukuumadiisa